ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): Melaka သို့ အလည်တစ်ခေါက်
မလင်းလက် စာမရေးဖြစ်ပဲ ပျောက်နေတာ အတော်ကြာနေပြီ။ ပိုစ့်တွေ များများမြန်မြန် ပုံမှန် တင်ပါဦးလား။ ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီး ဗဟုသုတ တိုးမိပါတယ်။
မလက္ကာကို သွားချင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ မရောက်ဖြစ်ဘူး။ အခုလို စုံစုံလင်လင် သိရတာ ကောင်းတယ်။ ညီမလေးက ချစ်သူနဲ့ဆိုတော့ ဘယ်နေရာသွားသွား ပျော်စရာချည်း ဖြစ်ရတာပေါ့လေ။ မြန်မာမလေးတွေ ရှိတဲ့ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်လေးက သန့်ရှင်းပြီး စားချင်စရာပဲနော်။
u didn't visit jonker walk? there isafamous bar there.. u will like it..
if u go melaka, u should try local food.. i don't mean malaysian food.. LOCAL FOOD!
လာလည်ပါတယ်။ မေ၇ာက်ဖြစ်တာကြာပြီ။ အဆင်ပြေကြပါစေ ..လင်းနေဦးမယ့်ကြယ်စင်မောင်နှံရေ။
မလက္ကာကို ပြန်လွမ်းသွားတယ်။ ပထမတစ်ခါ သွားတုန်းက မရောက်ဖြစ်တဲ့ နေရာတွေ ကျန်သေးတယ်။ လောလောဆယ်တော့ မသွားနိုင်သေးပါဘူး။
thanks for sharing. I haven't read about Melaka trip in suchabeautiful way of presentation.